नेपाल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसका विद्यार्थी सन्तोष बस्याल दोस्रो वर्षको परीक्षा सकाएर यसपालि घुम्न निस्किएका थिए । उनी गत फागुनमा यूएई उडेका थिए, जहाँ उनले विदेश गएजस्तो अनुभव नै गरेनन् किनभने जता गए पनि नेपाली नै भेटेका थिए ।
क्यान्स फिल्म फेस्टिभलको जारी ७१ औं संस्करणमा गएको मंगलबार नेपाली छोटो फिल्म ‘विङ्स’ ले नेस्प्रेसो ट्यालेन्ट इन्टरनेसनल अवार्ड जित्यो । निर्देशक किरण पोखरेललाई दिइएको अवार्ड फ्रान्सस्थित उनका प्रतिनिधिले ग्रहण गरे । यता स्वदेशमा किरण खुसीले गदगद भए ।
सोलुखुम्बुस्थित महाकुलुङ गाउँपालिका ५, गुदेलका सुमन कुलुङ मेलापात र गोठाला मात्र नभई स्कुल जाँदा पनि हिँड्ने कम दौडिने बढी गर्थे । त्यसैले पहाडको उकाली–ओरालीमा तीव्र गतिमा हिँड्दाहिँड्दै दौडमा अभ्यस्त भइसकेका थिए । उनी स्कुल र गाउँमा आयोजित दौड प्रतियोगितामा सधैं पहिलो हुन्थे ।
लेनोभोको नयाँ प्रयोग
अहिलेको फोन बजारको प्रतिस्पर्धामा लेनोभो त्यति ठूलो खेलाडी होइन । तर, लेनोभोले अहिले एउटा नयाँ प्रयोग गर्न खोजेको छ । एप्पल र सामसुङजस्ता मोबाइल बजारका ठूला खेलाडीले समेत बेजललेस भनेर फोन निर्माण गरिरहेका छन् तर उनीहरूको फोनमा स्क्रिन ठूलो भए पनि छेउमा स्क्रिनबाहेकको बडीको भाग पक्कै देखिन्छ ।
सस्तो एसएट बनाउँदै सामसुङ
महँगा आइफोनको बिक्री कम भएपछि केही वर्षअघि एप्पलले आइफोन एसई सार्वजनिक गरेको थियो । विशेषत: आइफोन सिक्स एसको बिक्री सोचेजस्तो नभएपछि एप्पलले सोही फिचर भएको सानो र सस्तो मूल्यको फोन एसईलाई बजार पठाएको थियो । अहिले सामसुङले पनि सोही योजना लागू गर्ने संकेत गरेको छ ।
युट्युबमा ‘टेक अ ब्रेक’
गत साता भएको आफ्नो डेभलपर कन्फ्रेन्समा गुगलले नयाँ अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड पीमा प्रयोगकर्तालाई मोबाइल कम चलाउन सघाउने फिचर राख्ने घोषणा गरेको थियो, जसका कारण प्रयोगकर्ताले दिनमा आफूले चाहेको समय मात्रै मोबाइलमा बिताउन सकून् ।
पञ्चकन्या मन्दिरको प्रवेशद्वार नजिकबाट सुरू भएको प्रतिस्पर्धा पञ्चकन्या मन्दिर क्षेत्र, बुद्धिकर्ण राईको भताभुंगे दरबार हुँदै विजयपुर फन्को लगाएर टुंग्याइएको थियो । ४.५ किमिको ल्याप्स बनाइएको थियो र यसमा जुनियर ब्वाइजले तीन फन्को मारेका थिए । महिलाले पनि उति नै ।
इमेल स्वत: डिलिट !
प्रेमी–प्रेमिकाबीच भएको सन्देश र फोटो आदानप्रदान होस् वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएको कुराकानी । आपसमा कुराकानी गर्ने, जानकारी आदानप्रदान गर्नेको सम्बन्ध सधैं एकनासको रहँदैन । हामीले च्याटमा गर्ने कुराकानीमा आफ्नो गोप्यता खोलिरहेका हुन्छौं वा अरूको कुरा काटिरहेका हुन्छौं । यस्तो संवेदनशील कुराकानी बाहिरिए के हुन्छ ?
सन् २०१८ खास–खास फेयरवेल–टुरका लागि सम्झिनेछ । एल्टन जोनले यसअघि नै यो वर्ष अन्तिम पटक टुर गर्ने बताइसकेका छन् । लगातार एकपछि अर्को टुरमा निस्कने र आफ्ना गीत प्रस्तुत गर्नेमा पर्छन्, उनी । खेलकुदमा खेलाडीको संन्यास जस्तै हो, यी गायक, गायिका र गीतकारका लागि अबदेखि टुर नगर्ने घोषणा । कसैले किन यसरी फेयरवेल–टुर गर्छन् ? यसको उत्तर सजिलो छैन । एउटा कारण हुन सक्छ, संगीतकर्मीमाथि उमेर हाबी हुनु ।